Mahita ny 'tranombakoka dimy, làlan'ny Madrid hafa | Vaovao momba ny dia
Mahita ny 'tranombakoka dimy, làlana Madrid hafa'
Maria | | España, Inona no ho hita
Ao amin'ny Paseo del Prado any Madrid no ahitanao ilay malaza amin'ny anarana hoe "telolafy zavakanto" na ny "fitsangatsanganan'ny zavakanto", làlan'ny tranombakoka telo izay ifantohan'ny iray amin'ireo lova sarobidy indrindra eto an-tany: ny Prado Museum , Museum Reina Sofía ary Museum Thyssen-Bornemisza.
Olona an'arivony maro isan-taona no mitsidika azy ireo fa tsy avy amin'ny 'triangolo kanto' ihany no misy an'i Madrid. Ao amin'ny renivohitr'i Espana dia misy tranombakoka marobe manana lohahevitra maro karazana.
Vao tsy ela akory izay, tranombakoka dimy eo ambanin'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, kolontsaina ary fanatanjahantena no niara-nanolotra lalana hafa amin'ny zavakanto manodidina ny tanàna: tranombakoka dimy, Madrid iray hafa.
Saingy, tranombakoka inona no mandrafitra io zotra hafahafa io ary ahoana no fomba hanatanterahana io zotram-pitondrantena vaovao natolotry ny renivohitra io?
1 Ny niandohan'ny zotra
2 Tranombakoka mandrafitra ny lalana
2.1 Tranombakoky ny kanto haingon-trano
2.2 Tranombakoka Cerralbo
2.3 Tranombakok'i Lázaro Galdiano
2.4 Museum of Romanticism
2.5 Tranombakoka Sorolla
3 Ahoana no fomba hanatanterahana ny zotra?
Ny niandohan'ny zotra
Ny tsimok'ireo tranombakoka 'Five, lalana iray hafa Madrid' dia hita tamin'ny 2012, taona nanombohan'ny tranombakoka nandrafitra ny làlan-kizorana nanao hetsika maromaro hampahafantarana ny tenany sy hampiroboroboana eo amin'ny sehatra fizahan-tany sy kolontsaina.
Tranombakoka mandrafitra ny lalana
Ity zotra ity dia manolo-kevitra ny hitsidika tranombakoka dimy feno tantara sy zavakanto. Tsy vitan'ny hoe hahafantatra ireo fanangonana tazominy ihany fa koa mankafy ny hakanton'ireo trano.
Tranombakoky ny kanto haingon-trano
Natokana ho an'ny fiainana isan'andro taloha sy ankehitriny, manana fanangonana maharitra izay mandentika ny mpitsidika ao amin'ny efitrano malalaky ny fotoana hafa izy. Etsy ankilany, ny fampirantiana vonjimaika dia natokana ho an'ny famolavolana ankehitriny sy ny mpanakanto tanora na efa miorina amin'ny tontolo iainantsika.
Ny fananganana ny tranombakoka nasionaly momba ny haingon-trano dia namboarina tamin'ny faran'ny taonjato faha-20 avy amin'ny Duchess of Santoña ho an'ny fahavaratra. Saingy, tsy nampiasaina ho an'ity tanjona ity velively ary nohofana mandra-pahatongan'ny 1932, rehefa natokana ho an'ny Sekolin'ny Fampianarana Ambony. Tamin'ny XNUMX izy io no lasa National Museum of Decorative Arts. Nanomboka teo, ny lapan'ny ankehitriny dia nandalo fanovana isan-karazany, na dia manaja ny fisehoany tany am-boalohany aza.
Ity tranombakoka ity dia mampiseho ny endrik'ilay haingon-trano nohon'ny trano aristokratika tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Ny famoriam-bola izay misy ny tranombakoka Cerralbo dia avy amin'ny fahagola, sary hosodoko ary sary sokitra (taonjato faha-1845 ka hatramin'ny faha-1922) nolovan'ny Enrique de Aguilera y Gamboa, Marquis of Cerralbo (XNUMX-XNUMX), liana amin'ny arkeolojia sy ny kolontsaina.
Tahaka ny National Museum of Decorative Arts, ity lapa ity dia natsangana ho toeram-ponenan'ny Marquis. Nifarana tamin'ny 1893 ny sanganasa ary ny haingon-trano anatiny dia misy singa rococo sy neo-baroque. Ny zaridainany tsara tarehy dia endrika sy fomba anglisy amin'ny taonjato faha-XNUMX ary iray amin'ireo tsiambaratelo nafenina tsara indrindra eto an-drenivohitra.
Tranombakok'i Lázaro Galdiano
Ao amin'ny tranobe tranainy iray ao Calle Serrano, ny tranombakoka Lázaro Galdiano dia mampiseho fanangonana zava-kanto tena tsara izay misy ny sanganasan'i Zurbarán, Bosco, Goya na El Greco ary koa ny varahina, seramika, kristaly, lamba, medaly ary fitaovam-piadiana sarobidy.
Ny famoronana azy dia noho ny tonian-dahatsoratr'i José Lázaro Galdiano izay, teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, no nandefa ny gazety literatiora La España Moderna.
Ny tranom-bakoka Lázaro Galdiano dia miandraikitra ny fampirantiana, ny fitehirizana ary ny fanaparitahana ny fanangonana zavakanto mahafinaritra ao amin'ny trano fonenany taloha, izay natao ihany koa ho fananganana fivorian'ny literatiora izay nandraisan'ny mpanoratra malaza toa an'i Rubén Darío, Miguel de Unamuno na Emilia Pardo Bazán.
Noforonin'i Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, Marqués de la Vega-Inclán (1858-1942) miaraka amin'ny anarana Museo Romántico ary nanokatra ny varavarany tamin'ny 1924 mba hampisehoana ireo sanganasa sy sangan'asan'ny mpanorina, na dia nahazo koa tahiry sy fanomezana.
Nakatona ny Museum of Romanticism tamin'ny 2001 noho ny fanavaozana isan-karazany. Tamin'ny taona 2009 rehefa nisokatra tamin'ny anarany ankehitriny izy io. Ity tranombakoka ity dia manolotra ny diany mankany amin'ny taonjato faha-XNUMX hijerena hoe nanao ahoana ny fiainana tamin'izany fotoana izany ho an'ny kilasy bourgeois. Amin'izany fomba izany, ny mpitsidika dia afaka mandehandeha mamakivaky ny efitrano fandihizana, ny efitrano fisakafoana, ny efitranon'ny tompon'ny trano na ny zaridaina, toerana feno filaminana.
Ny sanganasan'i Goya, Madrazo ary ireo Bécquer mirahalahy, seramika avy any Sargadelos sy Sèvres, fanangonana saribakoly porselana, fanaka fanao amperôra na Elizabethan ary ilay basy poleta namonoan'i Larra dia nanangana ny tontolon'ny romantisma.
Any amin'ny distrikan'i Chamberí, ny tranombakoka Sorolla dia noforonina araka ny fanirian'ilay mpitondratena azy, Clotilde García del Castillo, taorian'ny fahafatesan'ny vadiny. Tamin'ny 1925, ny fianakaviana ny fananany rehetra tamin'ny fanjakana Espaniola dia nahita tranombakoka ho fanomezam-boninahitra azy tao an-tranon'ilay artista sy atrikasa.
Ny Sorolla Museum dia anjakan'ny asan'ny mpanakanto sy ireo zavatra nangoniny fony fahavelony. Ankoatr'izay, nanomboka ny taona 1982 dia nampitomboina tamin'ny fividianana nataon'ny fanjakana hamita ny fanangonana.
Ny trano dia naorina tamin'ny 1911 ary tetikasan'i Joaquín Sorolla manokana. Ao anatiny dia azonao jerena ny fanangonana sary nataony momba ny tokony ho tranony sy ny zaridainany.
Ahoana no fomba hanatanterahana ny zotra?
Ho an'ny fitsidihana niarahan'ireto tranom-bakoka ireto dia namboarina ny voucher izay azo vidiana 12 euro amin'ny biraon'ny tapakilan'ny tsirairay amin'izy ireo ary hamela ny fitsidihana ireo toerana dimy ao anatin'ny 10 andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Mahita ny 'tranombakoka dimy, làlana Madrid hafa'
Andro fahavaratra any Bratislava
Ny volana Jolay vao hisokatra ho an'ny besinimaro ny Torre de los Picos de la Alhambra